आजदेखि हुने कडा लकडाउनमा पास बिना चल्न पाउने सवारी र पास कसरी लिने ? – Koshidaily
आजदेखि हुने कडा लकडाउनमा पास बिना चल्न पाउने सवारी र पास कसरी लिने ?
access_alarms Koshi daily १ जेष्ठ २०७७, बिहीबार ०३:०४	chat_bubble_outline 0	Comments
सरकारले आजबाट लागु हुने गरी लकडाउन कडा गर्ने भएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि लकडाउनमा कडाई गरेको हो । संक्रमण समुदायसम्म फैलिएपछि गृह मन्त्रालय कडा रुपमा प्रस्तुत भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि लकडाउन कडा गर्ने निर्देशन दिइसकेका छन् । संक्रमणलाई दृष्टिगत गरी जेठभर पनि लकडाउन लम्बनसक्ने बुझिएको छ । यसका लागि पूर्व तयारी भइसकेको विश्वस्त स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
एम्बुलेन्स, शवबाहन र दमकल, यसैगरी झण्डावाल सवारी, कुटनीतिक उन्मुक्ति तथा सुविधा प्राप्त नियोग, व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरु प्रेस काउन्सिलबाट जारी भएको प्रेस पास प्राप्त सञ्चारकर्मीहरु, स्वास्थ्य सेवामा खटिएका चिकित्सक, नर्स, फार्मा्सिस्ट प्रयोगशालामा कार्यरत प्राविधिक, अस्पतालमा कार्यरत अन्य कर्मचारीहरु, औषधी उत्पादन ढुवानी र विक्री वितरणमा संलग्न हुने जनशक्तिहरु खानेपानीको मर्मत सम्भार र वितरणमा संलगन जनशक्ति,
फोहोरमैला व्यवस्थापनमा परिचालित जनशक्ति ठूला खाद्य स्टोरमा कार्यरत जनशक्ति अत्यावश्यक वस्तु तथा ढुवानी गर्ने मालबाहक सवारी साधनहरु